भूँइकटहरका फाइदाः कस्ले खान हुन्छ ? कस्ले खान हुँदैन ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
भूँइकटहरका फाइदाः कस्ले खान हुन्छ ? कस्ले खान हुँदैन ?
स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । यसको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर, क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ ।
टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्न सक्छ
यसमा पोटासियम पाइने भएकाले मिर्गौलाका बिरामीले खाँदा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।swasthyakhabar patrika